Kubudirira kuburikidza neMashandisi Ekushandisa Ekushandisa | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 29, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kubasa kwangu, tinoshandisa Salesforce seCustomer Relationship Management (CRM) yedu chishandiso. Salesforce ndeimwe yeaya anoshamisa masisitimu anogona kuita chero chinhu, asi kazhinji zvinoda kushanda nesimba kusvika ikoko.
Imwe yekuedza kukuru kwandinoona Salesforce ichifambira mberi ndeyekushambadzira email kushambadza mashandisirwo emishumo ayo anotumirwa pamwedzi kune wega mushandisi. Mishumo inopa kumwe kunzwisisa munzvimbo dzekushandisa dzavari kushandisa zvizere pamwe nedzimwe nzvimbo dzinogona kuvabatsira.
Iyo otomatiki email email inopera nezvikamu zvina:
Nepo chirongwa chekushambadzira cheemail pane ichi chiri chakanakisa, ini ndinowana iwo maratidziro mukati mechikamu chimwe nechimwe achishaya kushanda kana kurerukirwa kwekuitwa. Unogona kudzvanya kuburikidza neumwe neumwe wenyaya dziri paemail kuti uwane zvimwe zvekuwedzera pane izvo zvinopihwa nechinhu. Simbisa, semuenzaniso, yaive nemazano gumi nemashanu mukati meemail yangu. Ruzhinji rwemazano aya runonakidza asi ini handina simba rekushandisa mamwe acho.
Iri izano rakakura rekushambadzira reemail iro ini randinokurudzira munhu wese muSoftware seindasitiri yeSevhisi yekushandisa; zvisinei, ini ndaizoita zvinotevera kurudziro:
Ramba uri nyore. Ndingakurudzira chinhu chimwe chete pachikamu chimwe nechimwe… chinhu chimwe chekushandisa, chimwe chekusimbisa, chimwe chekukwirisa, chimwe chekuwedzera.
Mukana webhizinesi. Nechinhu chimwe nechimwe, ini ndaizopa mukana webhizinesi kana wenyaya yekudzidza yemumwe mutengi anoshandisa chinhu icho.
Kutanga. Izvozvi zvavakawedzera kufarira kwako, rumwe ruzivo rwekuonana rwekuti ndiani aiteverera nerubatsiro rwaizove zvine musoro.
Nekugadzira uye nekushandisa nzira yekutengesa yeemail senge iyi, urikupa vatengi vako maturusi ekubudirira. Mukudzoka, kumisikidza kuitiswa kwesoftware yako kunotungamira mukuvandudzwa kwekushandisa uye mhedzisiro yebhizinesi - mukana wakanaka wekusimudzira mikana uye kuwedzerwa kuchengetedzwa kwevatengi. Kana iwe waita a automated zano rakadai seizvi, ndiudze. Ndingafarire kunzwa mhedzisiro!
Kurudziro yangu kune ino post yaive Chantelle pa Kuwedzera, uyo achangobva kuita a Zano Zuva email kune vatengi vayo kuti vapinde mukati. Neimwe nzira, vashandisi (kana kunyangwe vasiri-vatengi) vanogona kupinda muZuva Nezuva Matipi eBhizinesi Kubloga pa Twitter!
Tags: zvemukati analyticsndima.lyZvekutaura Zvemagariro
Nov 30, 2008 na9:29 PM
Ndichiri kurangarira kuti Hotmail inoita sei kurova kukuru kwekupedzisira makore gumi apfuura. Ivo vanoshandisa siginecha chinongedzo mune yese email yemushandisi kuparadzira izwi kutenderera pasirese iro rinokurumidza kubhururuka kumusoro. Ndine chokwadi chekuti email kushambadzira inzira yakanaka yekushambadzira asi kubata spam bhokisi kuchave tarenda rekuwedzera.
Nov 30, 2008 na11:20 PM
Isu takashandisa salesforce pabasa rangu rekupedzisira, uye ini ndine chokwadi kana kumiswa nemazvo zvinogona kubatsira, ndakaona mushandisi wemushandisi kuve muganho usingashandisike. Izvo zvakati, ini ndakanga ndisiri kuishandisa pakushambadzira, ini ndaiishandisa kutengesa. Pane imwe nguva ndinoda kuona CRM ichibatanidzwa nesocial media. Izvo zvingave zvakanyanya kukosha kwandiri pachangu. Data chete haisi hunhu hwangu. Ndinosarudza hukama.